Ny fanontaniana sy ny fangatahana fitsidihana dia tokony hodinihina
Azafady mba azafady mifandraisa amin'ny oniversite raha te hangataka kopia taratasy misy fanazavana mivoaka ao amin'ny tranokala kolejy ianao.
Filoha lefitra: Andriamatoa N. Patel
Afaka mifandray izy ireo amin'ny oniversite 0208 672 8582. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fanomezana SEND amin'ny tsindrio eny amin'ny oniversite Eto
INONA NO TOKONY HANITANA ANAO
Routes 155, 219, 249, 319, 355, 690 mandalo akaiky ny oniversite daholo.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsindrio ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny TFL eto ambany (mila miditra ny postcode SW17 7DF ianao)
Fitaterana ho any Londres
Izahay dia mandeha kely avy amin'ny gara fantsona Tooting Bec.
Mandeha amin'ny torolàlana an-tongotra mankany amin'ny tooting Bec:
Mivoaha ny gara mankany amin'ny lalan'ny Trinity, mihodina miankavanana ary mizaha lalana Trinity, mamakivaky ny mpandeha an-tongotra mamakivaky ny Trinity Road / M&S garazy. Raiso ny an-kavia voalohany mankany amin'ny Lalana Glenburnie nandalo ny filazam-baovao & Cafe, then first right into Langroyd Road. Araho amin'ny zoro tenda havia ity lalana ity (tonga Brenda Road izany).
Any amin'ny faran'ny làlana Brenda dia miatrika ny Kolejy Ernest Bevin ianao. Ampiasao ny fiampitana mpandeha an-tongotra ary miankavanana mankany amin'ny fidirana lehibe na miankavia miditra ao amin'ny làlan'ny fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny fiaran'ny fiara (hariva & amin'ny alàlan'ny fandaharana ihany).
Please click Eto for more information about the College’s plans to join a Multi Academy Trust.